Data ဝန်ဆောင်မှု ပရိုမိုရှင်းများ » JOOX VIP Music Pack
JOOX VIP Music Pack တစ်ကြိမ်ဝယ်ယူတိုင်း ဌားရမ်းခအခမဲ့ဖြင့် JOOX အထူးသုံးစွဲခွင့်ပါ ရရှိမည့် Data Pack ကို MPT မှာ ရရှိနိုင်ပါပြီ။
JOOX VIP Music Pack ကို နှစ်မျိုးရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
(၂၄ ) နာရီ JOOX Data Pack (၇) ရက် JOOX Data Pack
တန်ဖို: ၁၂၉ ကျပ် ၆၂၉ ကျပ်
ရရှိနိုင်မည့် Data ပမာဏ 120 MB 599 MB
သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်ရက် ၂၄ နာရီ ၇ ရက်
MPT JOOX Music Pack ကို JOOX VIP နဲ့ အတူ ဘယ်လိုရယူနိုင်မလဲ။
အဆင့် (၁)– ၂၄ နာရီ JOOX Music Pack (သို့မဟုတ်) ၇ရက် JOOX VIP Music Pack ကို ဝယ်ယူရန် *8003# ကို နှိပ်ပါ။
အဆင့် (၂)– ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ရွေးချယ်ဝယ်ယူပြီးပါက JOOX data ကို ရရှိမည် ဖြစ်ပြီး JOOX အထူးသုံးစွဲခွင့်အတွက် link ကို စာတိုဖြင့် လက်ခံရရှိပါမည်။
၁။ JOOX ဆိုတာ ဘာလဲ?
JOOX ဆိုတာ မြန်မာ သီချင်းများ နှင့် နိုင်ငံတကာ သီချင်းများကို App နှင့် Website ပေါ်မှတစ်ဆင့် တိုက်ရိုက်နားဆင်နိုင်သည့် ဖျော်ဖြေရေး ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Facebook, wechat or e-mail account နှင့် log-in ဝင်ပြီး နှစ်သက်ရာသီချင်းများကိုအင်တာနက်ဖြင့် စိတ်ကြိုက်နားဆင်နိုင်ပါသည်။ VIP ရယူထားသူများအနေဖြင့် သီချင်းများ တင်ခြင်း၊ ဒေါင်းလုတ်ပြုလုပ် ပြီး အင်တာနက် မရရှိချိန်တွင်အချိန်မရွေး ပြန်လည်နားဆင်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
၂။ JOOX app ကို ဘယ်လိုဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်မလဲ။
JOOX app ကို Android Google Play Store (သို့မဟုတ်) Apple App store တွင် ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်ပါတယ်။
၃။ JOOX မှာ နားထောင်သမျှ သီချင်းတွေအတွက် ပိုက်ဆံပေးရမှာလား။
JOOX app မှတစ်ဆင့် MPT JOOX VIP Music Pack ကို ဝယ်ယူပြီး ရရှိလာသော ကုဒ်ကို ရိုက်ထည့်ပြီးတာနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပ နောက်ဆုံးပေါ်သီချင်းများကို JOOX အထူးသုံးစွဲခွင့်ဖြင့် အခမဲ့နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက် Data အသုံးပြုမှုများကို ဝယ်ယူထားသော JOOX VIP Music Pack မှ ဖြတ်တောက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး Data များ ကုန်ဆုံးသွားပြီးနောက် အခြားဝယ်ယူထားသော Data Pack (သို့မဟုတ်) သုံးသလောက်ပေးအင်တာနက်နှုန်းနဲ့ကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၄။ နားဆင်နိုင်သည့် သီချင်းအရေအတွက်ကို ကန့်သတ်ထားတာရှိပါသလား ။
မရှိပါ။ နားဆင်နိုင်သည့် သီချင်းအရေအတွက်ကို ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါ။ JOOX Music Pack တစ်ခုချင်းစီမှ ဝယ်ယူထားသော ဒေတာ ပမာဏ နှင့် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားပြီးနောက် သက်ဆိုင်ရာ Data Pack များ(သို့မဟုတ်) သုံးသလောက်ပေးအင်တာနက်နှုန်းမှ
ကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်ယူထားသောဒေတာသက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက် နောက်ထပ် Data Pack ထပ်မံဝယ်ယူ၍ အကြိုက်ဆုံးသီချင်းများကို နားဆင်လိုက်ပါ။။
၅။ JOOX Music Pack ကို Facebook နဲ့ YouTube တို့အတွက်ရော သုံးလို့ရပါသလား။
အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ ဝယ်ယူရရှိထားသော Data ပမာဏ သည် JOOX အတွက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ JOOX မှ လွဲပြီး အခြားသောဒေတာ အသုံးပြုမှုများအတွက် ဝယ်ယူထားသော သက်ဆိုင်ရာ Data Pack (သို့မဟုတ်) သုံးသလောက်ပေးအင်တာနက်မှ ဖြတ်တောက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၆။ရရှိထားသော Link ဖြင့် JOOX VIP သို့ ဝင်ရောက်၍မရပါ။ ဘယ်လိုပြုလုပ်ရပါမလဲ။
၇။JOOX App တွင် သီချင်းများကို နားဆင်ရန် Account ရှိထားဖို့ လိုအပ်ပါသလား။
လိုအပ်ပါတယ်။ JOOX App တွင် account ရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထို account ကို Sign in ပြုလုပ်ပြီးနောက်တွင် စာတိုပေးပို့ထားသော Link မှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်ရပါမည်။
JOOX account ကို Facebook , Wechat or Email မှတစ်ဆင့် ဖွင့်နိုင်ပါသည်။
၈။ JOOX Data Quota 130MB (သို့မဟုတ်) 630MB ကုန်ဆုံးသွားပြီးနောက် သီချင်းများ ဆက်လက်နားထောင်နိုင်ပါသလား။
နားထောင်နိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ ဝယ်ယူရရှိထားသော ဒေတာပမာဏကုန်ဆုံးသွားပါက ဝယ်ယူထားသော သက်ဆိုင်ရာ Data Pack (သို့မဟုတ်) သုံးသလောက်ပေးအင်တာနက်မှ ဖြတ်တောက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၉။ MPT JOOX VIP Music Pack ကို ဝယ်ယူရန် အကြိမ် အကန့်အသတ် ရှိပါသလား။
မရှိပါ။ MPT JOOX VIP Music Pack ကို ဝယ်ယူရန် အကြိမ် အကန့်အသတ်မရှိပါ။ စိတ်ကြိုက် ဝယ်ယူနားထောင်နိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ JOOX Music Pack တစ်ခုထက်ပို၍ ဝယ်ယူမည်ဆိုပါက
ဒေတာပမာဏ နှင့် သက်တမ်းသည် ပေါင်းစည်းသွားပြီး ဝယ်ယူရရှိထားသော Pack များ၏ စုစုပေါင်းဒေတာပမာဏကို အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးဝယ်ယူထားသော Pack ၏ သက်တမ်းအတိုင်း ကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁၀။ လက်ရှိ JOOX VIP Music Pack ထဲရှိ သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး ကျန်ရှိသော ဒေတာလက်ကျန်များသည် နောက်ထပ်ဝယ်ယူလိုက်သော Data Pack တွင် ပေါင်းစည်းသွားမှာပါလား။
ဒေတာလက်ကျန်များပေါင်းစည်းသွားမှ ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံး Pack ၏ သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်အတိုင်း သတ်မှတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁၁. VIP ရယူခြင်းအောင်မြင်စွာ ပြီးသွားသော်လည်း VIP ဖြစ်ကြောင်းမမြင်ရသေးပါ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
တစ်ခါတစ်ရံ VIP ဖြစ်ကြောင်း မြင်ရရန် အချိန် အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
၁၂. သီချင်းတွေကို App အပြင်ဘက် ကို Download ပြုလုပ်နိုင်ပါသလား။
သီချင်းတွေကို App ထဲတွင်သာ Download ပြုလုပ်နိုင်ပြီး အင်တာနက် မလိုဘဲ App ကို အသုံးပြုပြီး ပြန်လည် နားဆင်နိုင်ပါတယ်။